Ngasebhishi Amwaj-Blue-Beach-kuyona SPA wavula ngo-2010 edolobheni resort of Soma Bay. Ihhotela angazamukela izivakashi ezingaphezu kuka-1,200. Lona omunye zokungcebeleka ambalwa eGibhithe, lapho ungakhululeka umzimba nomphefumulo. Yavula ensimini ka a spa enkulu nge ezihlukahlukene beauty zokwelapha. Phakathi ukuhlala kwakho, izivakashi zihlangana iholidi emnandi futhi ewusizo: ezemidlalo, ukwelashwa Wellness yokuthamela ogwini. Thola ihhotela Amwaj-Blue-Beach-kuyona-SPA kungaba kusuka esikhumulweni sezindiza e Hurghada (45 km).
Lena oasis kweqiniso phakathi ebhishi anesihlabathi. It is kahle wacabanga Uhlelo izithombe for kokubili izingane kanye nabantu abadala. umbono ngalinye esiqhutshwa imincintiswano ezithakazelisayo futhi amahlaya. eziyinkimbinkimbi ezikhona ngokuyinhloko yakhiwe imibhangqwana eshadile nezingane, kusukela izingane, ihhotela has konke i break ezithandekayo nezijabulisayo kude.
Ngo 4-ihhotela storied Amwaj-Blue-Beach-Resort- SPA 5 igxile 378 amakamelo ukhululekile futhi-moya ngosayizi ubuncane 35 m2. Zonke amakamelo ahlotshiswe ngemibala esithambile futhi efudumele, konke yokugezela siqu. Esikhathini lokulala uthola embhedeni kabili, usofa, eliseceleni kombhede amatafula, edeskini, i-TV ne ikhebula ithelevishini yezokusakaza.
Amakamelo isigaba "Umndeni" - 2 okulala, kanye nekamelo lokugezela, in the "Isudi" - a zihlalo endaweni ozinikele futhi 2 zangasese. Uma ekamelweni has a ithala ukubukwa emangalisa legceke, ingadi kanye ulwandle. Zibonisa - air conditioning egumbini ngalinye, ephephile khulula, Inthanethi ngenkokhelo, ucingo kanye mini-bar. On isicelo - Embhedeni owenezelwe.
ukudla okunempilo umqondo "zonke okufakayo" ulinde wena e Amwaj-Blue-Beach-kuyona-SPA. Emini, izivakashi ukuzisiza Ungadla khulula neziphuzo ibha eyinkimbinkimbi sika.
Nambitha izibiliboco futhi amakhono kusukela hlupha uphumelela izikhungo zendawo (ehhotela):
- «Paparazzi» - yokudlela Italian abantu 65, ivulwa kuze kushaye 22 ntambama. Bakhonza pizza kakhulu nge toppings ehlukene kanye pasta isiNtaliyane.
- «Rendevouz» - cafe ku ithala ongaphandle, iyakwamukela izimenywa amahora 00. Esikhathini imenyu, inkululeko ebanzi ekukhetheni utshwala elite.
- «Bistro» - yokwamukela izivakashi bar inikeza ukudla okulula, ukudla kwasemini yasekuseni neziphuzo lenqaba ezahlukene.
- «Ibhuloho Ibha» - iziphuzo ezidakayo nezinto zokuhlanza ithambe imenyu.
- «Vuselela Ibha» - amabha ukusebenza kuze kwelanga nge imenyu ejwayelekile.
- «Aquarius» - disco ibha nge izihlalo ezingu-80. Awukwazi kuphela adle, kodwa futhi ukudansa.
- «Fusion Ibha» - ibha etholakala maphakathi spa, ukunikela izithelo futhi zezinkambi engamakhambi.
Izivakashi eziyinkimbinkimbi Amwaj-Blue-Beach-kuyona-SPA ungumnikazi elula eyimfihlo lolwandle, okuyinto 260 amamitha away. Zonke Izinsiza ogwini khulula. Beach kuyinto sandy nge emnyango esisebenzayo nesiphephile olwandle. Kuze kuhlwe ogwini ukusebenza «Sun Set» - yokudlela lapho ungakwazi ukunambitha izitsha okumnandi futhi amnandi eyosiwe.
Esizeni ifakwe eyakhelwe ongaphandle indawo yokubhukuda nge sunbeds futhi canopies. Azungeze ichibi ukuvula emakhazeni massage and ibha. Leisure ezemidlalo: Ukuvivinya umzimba ngendlela, ukufaneleka, igalofu, mini-football, imicibisholo, ithenisi, volleyball, diving, amabhiliyade, Boccia, ikamela ogibele, ihhashi ogibele futhi Scooters amanzi.
inkonzo Paid: Jacuzzi, massage, intanethi, disco, spa zokwelapha, ubuhle salon, Hammam. Izingane Corner izici evuthayo yokubhukuda nge-slide, ebaleni lokudlala, club.
Izikhungo ngesikhathi Ihhotela Amwaj Blue Beach Resort Indawo abantu SPA - Abu Soma, ngokubona holidaymakers, is kahle asethuthukile. Zonke izisebenzi bahlezi ngokuthula izivakashi wathi kahle ngesiRashiya. Ejabulisa ukudla esezingeni eliphakeme kuzo zonke izikole. Izivakashi njalo aneliseke imisebenzi yokuzilibazisa ahlukahlukene kanye disco kusihlwa.
Amakamelo zesimanje futhi ihlanzekile. Kukhona konke okudingekile ukuze ukuhlala ngokugcwele. Air conditioning njalo egijima, ngakho ngisho ukushisa emakamelweni kuphole. Labo iholidi baye nezingane zabo, bajabula ngokukhululwa inkonzo yezingane ukunakekela izingane ngabasebenzi.
Ihhotela leCaptain Pier Hotel 3 * (Cyprus, Protaras): incazelo, izithombe kanye nokubuyekezwa kwezivakashi
Nezokungcebeleka isikhungo "Shavskie Valley": ingqalasizinda kanye nemisebenzi ehlukahlukeneko kanye nokubuyekeza mayelana club
Hockey umdlali u-Alexander Guskov: Biography, ukuphila siqu futhi ezithakazelisayo amaqiniso
Abadla Colorado amazambane bhungane? The main izitha zemvelo izinambuzane
Kanjani ukwakha imisipha ohlangothini besisu?
Izimpawu ukuhlaselwa isifo senhliziyo kwabesifazane